SomaliTalk.com » Rooble
Home » Qoraallada Halkudhegga "Rooble"
Taariikhda dhaqaale & Ganacsi ee soomaaliya ?
“ Taariikhdu ma gaboowdo ” Gogoldhig / Hordhac Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Qormadaan ayaan kaga hadli doonaa Taariikhda Ganacsi iyo dhaqaale ee dalka soomaaliya Waxaa afeef ah in qoraalkaan aan loogu tala gelin in uu koobo dhamaan wixii ka dhacay Soomaliya ee quseeyay dhaqaalaha iyo ganacsiga . Sidaa daraaded, dhacdooyinka...
Milicsiga taariikhda : degmada jowhar ?
Hordhac Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Qormadan ayaan waxaan u hibeeyay degmada jowhar oo aan rabbo in aan qoraalkeygan kusoo koobo taariikhda degmada jowhar intii uu ilaah iga garansiiyo oo aan soo uruuriyay . Magaca jowhar ka hor waxaa magaalada loo yaqiinay BUUNDO Jowhar waa caasimada gobalka shabeelaha dhexe ee soomaaliya...